घरमा कसैलाई कोरोना संक्रमण भए के गर्ने? – Health Post Nepal
२०७८ पुष २४ गते १२:१०
काठमाडौं – विश्वका धेरै देशमा फेरि एक पटक कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय दिनानुदिन संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। गत शुक्रबारमात्र ९६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या पनि २७ पुगेको छ। नेपालमा हाल ५ हजार ७४१ सक्रिय संक्रमित छन् भने कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ९ लाख २७ हजार ८९३ पुगिसकेको छ। कोरोनाका कारण ११ हजार ६०२ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
ओमिक्रोन भेरियन्टलाई कोरोनाको केस बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार कोभिड-१९ को ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन्छ, त्यसैले मानिसहरूले थप सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। अहिले ओमिक्रोनलाई लिएर मानिसहरूको दिमागमा अनेक प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि, यदि तपाईंको घरको कुनै सदस्य कोभिड-१९ वा ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित भए के गर्ने?
होम क्वारेन्टाइन कि अस्पताल?
६० वर्षभन्दा कम उमेरका र अन्य कुनै रोगबाट पीडित नभएका वा हल्का लक्षण देखिएका कोरोनाका बिरामीहरूलाई सामान्यत: होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सल्लाह दिइन्छ। यद्यपि, बिरामी होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा सावधानीका रूपमा अस्पताल भर्ना गर्ने, चिकित्सकसँग सल्लाह गरेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ।
संक्रमित व्यक्तिले के गर्नुपर्छ?
-कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि सबैभन्दा पहिले बिरामीले आत्तिनु हुँदैन, संयमता अपनाउनुपर्छ।
-बिरामीलाई तुरुन्तै छुट्टै कोठामा राख्नुपर्छ। त्यस कोठामा पर्याप्त भेन्टिलेसन हुनुपर्छ।
-ओमिक्रोन होस् वा कोरोनाको अन्य कुनै पनि प्रकार, संक्रमित व्यक्तिले सधैं मास्क लगाउनुपर्छ। विशेष गरी कुनै पनि व्यक्तिको नजिक आउँदा, राम्रोसँग मास्क लगाउन आवश्यक छ।
-संक्रमित व्यक्ति डाक्टरसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुपर्छ। तपाईंको अक्सिजनको स्तर, मुटुको गति आदि केही घण्टाको अन्तरालमा निरन्तर जाँच गरिरहनुपर्छ। कुनै समस्या वा असहज महसुस भएमा तुरुन्तै परिवारका सदस्य वा चिकित्सकलाई जानकारी गराउनु पर्छ।
-कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिको चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गर्नुपर्छ। विशेषगरी चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ।
संक्रमित व्यक्तिका आफन्तले के गर्नुपर्छ?
-सरकारको निर्देशन अनुसार परिवारका सदस्य केही दिन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। परिवारका सदस्यले पनि कोरोना परीक्षण गराउन आवश्यक छ।
-कोरोना संक्रमितको हेरचाहको जिम्मा परिवारको एक सदस्यलाई दिनुपर्छ। बिरामीलाई मद्दत चाहिने बेलामा उक्त व्यक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ।
-बिरामीको वरपर जाने व्यक्तिले तीन तहको मास्क लगाउनुपर्छ। विशेष गरी जब बिरामीको नजिक भइन्छ एन-९५ मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। मास्कको बाहिरी भाग छुनु हुँदैन। मास्क पुरानो, फोहोर वा भिजेको छ भने तुरुन्तै प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
-कोरोना विरुद्धको लडाईंमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बारम्बार हात धुनु र सफा राख्नु हो। कम्तिमा ४० सेकेन्डसम्म लगातार साबुन-पानीले हात धुनुहोस्। विशेष गरी बिरामीको सम्पर्कमा आएपछि हात धुन नबिर्सनुस्।
-बिरामीको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ जस्तै थूक वा र्‍याल आदि आफ्नो सम्पर्कमा आउन नदिनुहोस्। त्यसैले बिरामीको हेरचाह गर्दा सधैं पञ्जा प्रयोग गर्नुहोस्। यी पन्जाहरू पनि समय-समयमा परिवर्तन गर्नुस्।
-बिरामीले प्रयोग गरेको वा गरिरहेको वस्तुहरू घरका अन्य सदस्यहरूले प्रयोग गर्नुहुँदैन। उदाहरणका लागि, कोरोना संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा, तौलिया र तन्ना परिवारका अन्य सदस्यले प्रयोग गर्नु हुँदैन। कोरोना संक्रमितसँग बसेर खानपिन पनि नगर्नुहोस्।
-घरमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको हेरचाह तथा अनुगमन निरन्तर गरिरहनुपर्छ।
-यदि बिरामीलाई लगातार धेरै दिनसम्म १०० डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा, अक्सिजनको स्तर ९३% भन्दा कम भएमा, लगातार छाती दुख्ने, थकान महसुस भएमा तुरुन्तै चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ।
होम आइसोलेसनमा बिरामी बसेको समयमा घरमा पर्याप्त मेडिकल फोहोर जम्मा हुन्छ। जसमा प्रयोग भएका मास्क, सिरिन्ज, औषधि, खाद्यवस्तुका प्याकेटहरु हुन्छन्। यी मध्ये धेरैजसो चीजहरू बिरामीहरूले प्रयोग गरेको हुनाले तिनीहरूबाट संक्रमण फैलिने जोखिम धेरै हुन्छ। त्यसैले यस्तो बायोमेडिकल फोहोरलाई यताउता फाल्नेभन्दा पनि प्याकेट वा प्लाष्टिकमा भण्डारण गरेर विसर्जन गर्नुपर्छ।
न्यानो हिटरले निम्त्याउन सक्छ ठूलै स्वास्थ्य समस्या